ယုန်လေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေကြတဲ့သူတွေ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြလာခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်….. – Cele Snap
ယုန်လေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေကြတဲ့သူတွေ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြလာခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်…..
March 11, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လူလူချင်း တူတယ်။ မတူတာ စိတ်ဓာတ်။ သတင်းတော်တော်များများမှာ ဇာတ်လိုက် မြင့်မြတ် ကို B.L.A.M.E နေကြတယ်။ နောက်ပီးလူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာလဲ Speak out မလုပ်လို့ဆို ပြီး ပြောသံတွေကြားနေရတယ်။ နားမခံသာလို့. ရေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဗျ.yonelay နဲ့ပေါင်းတိုင်း သူ့လိုမထင်လိုက်နဲ့ဗျ။ ဇာတ်လိုက်က ဇာတ်လိုက် လူဆိုးက လူဆိုး။ပေါ်ပင်လိုက် တစက်မှအချိုးးမပြေတဲ့ yonelay နဲ့နှိုင်းရင် နှိုင်းတဲ့သူရိုင်းမှာပဲ။
ဘောလုံးစကားနဲ့ မြင်သာထင်သာရှိအောင်ပြောရရင်တော့မြင့်မြတ် အနေထိုင်က မက်ဆီလိုပဲဗျ။ သူလုပ်စရာရှိတာ သူလုပ်တယ်။အနေအေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ မန္တလေးက မြင့်မြတ်သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်ပြည်သူနဲ့ တစ်သားထဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ နေ့တိုင်းတွေ့တယ်တဲ့.. ဆိုတော့လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်..မှာ. ပုံရိုက်တင်ပီး ပြန်သွားတဲ့သူထက်စာရင်
ကျနော်တို့ဇာတ်လိုက်ကြီးက တကယ်ကိုလဲ အပြင်မှာဇာတ်လိုက်ကျော် ပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းပါ။ အသားလွတ် ဝေဖန်နေသူတွေကို မြင့်မြတ်​လေသံနဲ့ပြောလိုက်မယ်.. “ဟျောင့် ဂျင်းကောင်မင်းက ဒိုးခပဲ”။ ပရိတ်သတ်တွေလဲ ပျော်ရွှင်သောနေ့လေးတစ်နေ့ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိတျသတျကွီးရေ လူလူခငျြး တူတယျ။ မတူတာ စိတျဓာတျ။ သတငျးတျောတျောမြားမြားမှာ ဇာတျလိုကျ မွငျ့မွတျ ကို B.L.A.M.E နကွေတယျ။ နောကျပီးလူမှု့ကှနျယကျပျေါမှာလဲ Speak out မလုပျလို့ဆို ပွီး ပွောသံတှကွေားနရေတယျ။ နားမခံသာလို့. ရေးရခွငျးဖွဈတယျ။ ဒီလိုဗြ.yonelay နဲ့ပေါငျးတိုငျး သူ့လိုမထငျလိုကျနဲ့ဗြ။ ဇာတျလိုကျက ဇာတျလိုကျ လူဆိုးက လူဆိုး။ပျေါပငျလိုကျ တစကျမှအခြိုးးမပွတေဲ့ yonelay နဲ့နှိုငျးရငျ နှိုငျးတဲ့သူရိုငျးမှာပဲ။
ဘောလုံးစကားနဲ့ မွငျသာထငျသာရှိအောငျပွောရရငျတော့မွငျ့မွတျ အနထေိုငျက မကျဆီလိုပဲဗြ။ သူလုပျစရာရှိတာ သူလုပျတယျ။အနအေေးတယျပေါ့ဗြာ။ မန်တလေးက မွငျ့မွတျသူငယျခငျြးက ပွောတယျပွညျသူနဲ့ တဈသားထဲ ဆန်ဒထုတျဖျောတာ နတေို့ငျးတှတေ့ယျတဲ့.. ဆိုတော့လူမှု့ကှနျယကျပျေါ..မှာ. ပုံရိုကျတငျပီး ပွနျသှားတဲ့သူထကျစာရငျ
ကနြျောတို့ဇာတျလိုကျကွီးက တကယျကိုလဲ အပွငျမှာဇာတျလိုကျကြျော ပွညျသူနဲ့တဈသားတညျးပါ။ အသားလှတျ ဝဖေနျနသေူတှကေို မွငျ့မွတျ​လသေံနဲ့ပွောလိုကျမယျ.. “ဟြောငျ့ ဂငျြးကောငျမငျးက ဒိုးခပဲ”။ ပရိတျသတျတှလေဲ ပြျောရှငျသောနလေ့ေးတဈနေ့ ကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ပြည်သူ လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသံတိတ်နေတဲ့အတွက် အကယ်ဒမီ ဂွမ်းပုံအား ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ရာသက်ပန်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း…..
ရှေ့ဆုံးကနေ ရဲရဲရင့်ရင့် ကာကွယ်ခုခံပေးနေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မေ…..
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ (၂)နှစ်ကျော်သွားပေမယ့်လည်း တစ်ရက်မှမမေ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ
နွားနို့တွေကို ယူမသောက်ပါဘူးလို့ညာပြောတဲ့ချစ်သူရီရီပွင့်ဖြူကို သက်သေနဲ့တကွဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ဗီဒီယို
သူမအိမ်ကိုပြန်လာရင် ကြိုဆိုမယ့်သူရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောအေးမြတ်သူ
တစ်ဦးတည်းသောမြေးမလေးShandraရဲ့ ရက်(၁၀၀)ပြည့်မွေးနေ့အတွက် တန်ဖိုးကြီးလွန်းလှတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးရဲ့မိခင်
2021 ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး (၃)ယောက်ရဲ့အကြောင်း